C/raxmaan C/Shakuur oo farrin u diray ciidamada isku hor fadhiya Muqdisho (DAAWO) - Ceeldheer News: Somalia News Update
C/raxmaan C/Shakuur oo farrin u diray ciidamada isku hor fadhiya Muqdisho (DAAWO)
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa si faah-faahsan uga hadlay xaaladda dalka iyo go’aamadii ka soo baxay maamulada Galmudug,Hirshabeelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo la hadlay Warbahinta ayaa shaaca ka qaaday in uu soo dhaweynayo wax kasta oo lagu bad-baadinayo dalka,islamarkaana lagu diidayo muddo kororsi, Kursi jaceyl iyo Kalitalisnimo.
Waxa uu u mahad-celiyay cid kasta oo ka qeyb-qaadatay dejinta xasaradda Siyaasadeed ee dalka gaar ahaanna iska hor imaadyadii ka dhacay magaalada Muqdisho,isaga oo carabka ku dhuftay in uu ka xunyahay in qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ay ka barakacaan Xaafadahooda.
Isaga oo sii hadlayay waxa uu u mahad-celiyay Saraakiisha ciidamada ee ka soo hor jeestay muddo kororsiga sharci darada ah ee iskugu jira Millatari iyo Boliis,isaga oo ku ammaanay doorka ay ka qaateen ka hortaga Kalitalisnimo.
Ugu dambeyntii ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa isku hor fadhiya magaalada Muqdisho ayuu ugu baaqay in ay dib ugu laabtaan fariisimahooda,islamarkaana dib u billaabaan la dagaalanka Alshabaab.
DEG DEG:- Laftagareen oo go’aan lama filaan ah ka soo saaray khilaafka doorashada iyo xaaladda Muqdisho
Xasan Sheekh oo ka hadlay go’aankii Hirshabeelle iyo Galmudug,Farriina u diray Farmaajo
Xasan Sheekh oo ka hadlay go'aankii Hirshabeelle iyo Galmudug,Farriina u diray Farmaajo
Akhriso:- Wasaaradda arrimaha gudaha XFS oo ku dhaqaaday in dalku doorasho aaday
Midowga musharaxiinta oo war ka soo saaray go'aankii Galmudug iyo Hirshabeelle